NTA: mijoro miaraka amin'ny Brand USA isika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » NTA: mijoro miaraka amin'ny Brand USA isika
Jona 23, 2012
DENVER, Colorado - Ny filohan'ny NTA, Lisa Simon dia maniry ny sehatry ny fizahan-tany hijoro mafy miaraka amin'i Brand USA, satria miditra amin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita ny masoivohon'i Etazonia.
DENVER, Colorado - Ny filohan'ny NTA, Lisa Simon dia maniry ny sehatry ny fizahan-tany hijoro mafy miaraka amin'i Brand USA, satria miditra amin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita ny masoivohon'i Etazonia. Nidina ifotony ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Brand USA, Jim Evans, omaly taorian'ny nitarihany ny fikambanana tamin'ny herintaona. Ny orinasam-panjakana-tsy miankina dia noforonin'ny Kongresy tamin'ny 2010 taorian'ny fihenan'ny anjerimanontolo amerikana ny 37 isan-jato nandritra ny folo taona lasa.
"Brand USA dia miasa amin'ny famerenana ireo mpitsangatsangana iraisam-pirenena hiverina any Etazonia, ary zava-dehibe ho antsika rehetra amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ny hanohana ny fikambanana," hoy i Simon, "NTA dia feno fankasitrahana an'i Jim Evans tamin'ny fitarihany, ary izahay manantena fandrosoana mitohy. ”
Nilaza i Simon fa nanantona an'i Caroline Beteta, filoha voafidin'ny Brand USA, hanolotra ny tohanan'ny fanohanana an'i NTA. Beteta dia hanompo an'i Brand USA ho CEO sementara.
Tamin'ny volana lasa teo, Brand USA dia nanangana ny fampielezana marketing voalohany natambatra ho an'ny firenena, fampiroboroboana an'i Etazonia ho toerana voalohany fitsangatsanganana amin'ny tsena ambaratonga telo lehibe: Japan, Canada, ary UK Ny fampielezan-kevitra dia misy sary sy fampahalalana mahaliana momba ny vokatra fizahan-tany isan-karazany ao amin'ny firenena. fomba fidirana. Ny zava-bita hafa nandritra ny taona voalohany niasàny dia misy ny fampivoarana ny mari-pamantarana matanjaka; mamorona tranonkala fampahalalana sy fampiroboroboana; ary mametraka fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana indostrialy mihoatra ny 250, izay hanangona vola mitentina 10 tapitrisa dolara amerikana amin'ny fandraisana anjaran'ny indostria ary 30 tapitrisa dolara amerikana ho an'ny fandraisana anjara ara-nofo.
“Toerana, mpamatsy ary mpandraharaha fizahan-tany manerana ny firenena no handray soa amin'ity fampielezana marketing vaovao ity, saingy tsy misy fisakafoanana antoandro maimaimpoana,” hoy i Simon, eto anio hiresaka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Tour Colorado. “Ny Brand USA dia mila manangona vola sy fampiasam-bola an-tsokosoko hamoahana ny vola federaly natokana ho an'ny asany. Miantso ireo mpiara-miasa amiko amin'ny indostria aho mba hitady fomba hanampiana, ”hoy ihany izy.
Simon dia nanonona ohatra roa amin'ny fanohanan'ny NTA an'i Brand USA: Ny fikambanana dia miara-miasa amin'i Brand USA hanolotra ny Discover America Pavilion ao amin'ny China International Travel Mart any Shanghai amin'ity volana novambra ity. Ny vola azo amin'ity hetsika ity dia ahafahan'ny Brand USA mahazo dolara mifanaraka amin'ny vidin'ny fizahan-tany iraisan'ny mpizahatany. Ary tamin'ny volana Mey, NTA dia nanararaotra ny Brand USA hiresaka amin'ireo matihanina amin'ny indostria ao amin'ny Grassroots Congressional Travel Summit, tohanan'ny NTA miaraka amin'ny Fikambanana fizahan-tany any atsimo atsinanana sy ny International Association Destination Marketing Association.
"Ny zavatra iray azontsika rehetra atao dia ny fisoloana vava amin'ny Brand USA ary manampy amin'ny fitazomana ny vanim-potoana," hoy i Simon, "alao antoka fa fantatry ny mpanao lalàna federaly anao fa mitarika asa sy fanambinana bebe kokoa eto an-trano ny fivarotana ity firenena ity any ivelany."
Raha mila fampahalalana momba ny fotoana ahafahan'ny fiaraha-miasa natolotry ny Brand USA dia mandefasa mailaka [email voaaro] .